အမျိုးသားအဂါင်္ကြီးဆေး သောက်ပြီး ဆက်ဆံမိလို့ အမျိုးသမီးဖြစ်သူ သေဆုံး | Buzzy
အခုတော့ အမျိုးသားကို ရဲတွေက ဖမ်းဆီးလိုက်ပါပြီ။
သာမန်ထက်ပိုတဲ့ သာယာမှု ရဖို့အတွက် အသက် ၅၀ အရွယ် အမျိုးသား Fatai Busari ဟာ အမျိုးသားအဂါင်္ကြီးဆေး သုံးစွဲပြီး ဆက်ဆံခဲ့လို့ သူ့ရဲ. အမျိုးသမီး အသက် ၄၈ နှစ်အရွယ် Sadiat Adejuwon ဟာ သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
သာမနျထကျပိုတဲ့ သာယာမှု ရဖို့အတှကျ အသကျ ၅၀ အရှယျ အမြိုးသား Fatai Busari ဟာ အမြိုးသားအဂါင်ျကွီးဆေး သုံးစှဲပွီး ဆကျဆံခဲ့လို့ သူ့ရဲ. အမြိုးသမီး အသကျ ၄၈ နှဈအရှယျ Sadiat Adejuwon ဟာ သဆေုံးခဲ့ပါတယျ။
အခုလိုမျိုး ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကြောင့် အမျိုးသားကို ဖမ်းဆီးထားလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီဖြစ်ရပ်ဟာ နိုင်ဂျီးရီးယားမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ၊ အမျိုးသားက မဆက်ဆံခင်မှာ အဂါင်္ကြီးဆေး သောက်သုံးခဲ့တာပါ ။
အခုလိုမြိုး ဖွဈပှားခဲ့ခွငျးကွောငျ့ အမြိုးသားကို ဖမျးဆီးထားလိုကျပွီဖွဈပါတယျ ။ ဒီဖွဈရပျဟာ နိုငျဂြီးရီးယားမှာ ဖွဈပှားခဲ့တာဖွဈပွီး ၊ အမြိုးသားက မဆကျဆံခငျမှာ အဂါင်ျကွီးဆေး သောကျသုံးခဲ့တာပါ ။
အခုလို ဆေးသောက်သုံးပြီး ဆက်ဆံမှုကြောင့် အမျိုးသမီးဟာ ကိုယ်တွင်းအဂါင်္က သွေးယိုစီးမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ သေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။ အမျိုးသားဟာ ပြစ်ဒဏ်ကျခံရဖို့ ရှိနေပါတယ်။ အတက်ဆန်းမထွင်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
အခုလို ဆေးသောကျသုံးပွီး ဆကျဆံမှုကွောငျ့ အမြိုးသမီးဟာ ကိုယျတှငျးအဂါင်ျက သှေးယိုစီးမှု ဖွဈပှားခဲ့ပွီး နောကျပိုငျးမှာ သဆေုံးသှားခဲ့ရပါတယျ။ အမြိုးသားဟာ ပွဈဒဏျကခြံရဖို့ ရှိနပေါတယျ။ အတကျဆနျးမထှငျတာ အကောငျးဆုံးပါပဲ။